Miyay Gabar Kale Kaa Qaadatay Saaxiibkaa? 3 Qaab Oo Looga Soo Ceshado Saaxiibkaa | Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA Miyay Gabar Kale Kaa Qaadatay Saaxiibkaa? 3 Qaab Oo Looga Soo Ceshado...
Miyay naag kale kaa qaadatay saaxiibkaa? Haddii aad si kam ah adiga iskaga fogeysay amaba aadan waxaad sameysay illaa uu kaa tagay.
Waa jiraan calaamaado aad tusi karto oo aad ugu muujin karto inaad rabtid fursad labaad.
Haddii aad xasuusisid waqtiyadii wacnaa, waxaa suurtagal ah inuu kuusoo laabto.
Dib u hagaaji xiriirkiina
Tani waxay qaadan kartaa xoogaa waqti ah waxayna u baahantahay inay noqoto waqti ku habboon.
Marka hadduu dhamaado muddada xiriirkiina, waxaad u baahantahay inaad ka baaraan degto qaabab kale oo aad dib ugula xiriiri lahayd lamaanahaagi hore ama saaxiibkaa hore. Qaabka ugu wanaagsan ee lagu sameyn karo taas ayaa ah:
Tusaale ahaan, haddii aad saaxiibo wadaagtaan kadib waxaad ka qeyb geli kartaa xaflad ay saaxiibadiin dhiganayaan sababtoo ah qofkaas isaga kaliya saaxiib lama ahan adigana saaxiib ayaa la tahay ama haddii aadan dooneyn inaad qaabkaas u marto waxaad u diri kartaa farriin adigoo weydiinaya waxaadan aqoon oo kale, sida magaca maqaayad meel hebel ku taallo oo labadiina aad mar tagteen.
Wadasheekeysigaan ka dhig mid gaaban oo waxba yaanan lagaa dareemin.
Waa inaad isku wanaagsantihiin isaga iyo saaxiibtiis
Waa inaad isku wanaagsantihiin labadooda sidaa darteed lagama shakinaayo inaad la hadashid saaxiibkaa hore.
Iska ilaali inaad soo qaado wax quseeya xiriirkiini hore iyadoo ay idinla joogto gabadha uu iminka saaxiibka la yahay sababtoo ah taasi waxay adkeeneysaa qorshahaaga aad ku hanan lahayd ninkaas, waxana la ogaanayaa inaad wali ninka rabtid.
Mar mar farriin u dir hana ka badin
Markaad dib u hagaajiso xiriirkii idinka dhexeeyay Ex-kaagi, waxaad si caadi ah u bilaabi kartaa inaad farriin u dirto.
U diridda farriimo madadaalo ah iyo kuwo ku saabsan kaftanadii hore ee idin dhex mari jiray ayaa tuseysa inaa wali qiimeyso wixii idin dhex mari jiray iyadoo sidoo kale taas aysan u muuqan inaad rabtid.
Markeey sheekada halkaas mareyso, waxaad si tartiib ah u galeysaa noloshiisa waxaana jiri kara walaac ka yimaada saaxiibtiis cusub.
Ku dadaal inaadan dhalleeceyn saaxiibtiis cusub iyadoo la joogta ama farriin aadan wax uga sheegin.
Noqo qof degan oo isku kalsoon sababtoo ah haddii sii wado inuu kula sii hadlo iyadoo ay jirto in saaxiibtiis ay ka walaacsantahay, taasi waa astaan wanaagsan oo muujineysa in qorshahaagu shaqeynayo.
Fikirkaaga Noo Reeb, Mahadsanid.
Previous article6 Waxyaabood Oo Lamaanahaagu Sameeyo Oo Ka Qiimo Badan Inuu Ku Dhaho “Waanku Jeclahay”
Next articleThings your wedding planner will never tell you
UGAAR AH DUMARKA: Sida Lagu Noqdo Gabadha Uu Ninkaaga Mar Kasta...
The exact age to start using anti-aging skin creams — according...